mhando 0.4.0 – Happy integrations itsva
Ndira 1, 2010 kubudikidza chipo 25 Comments
shanduro itsva iyi inopa integrations zviviri zvikuru mukurumbira Wordpress plugins. wokutanga, Google-XML-sitemaps inopa nzira kuumba sitemaps dzokushandisa Google uye Google webmaster maturusi, vari kusangana anosika nerimwe URL ari sitemaps mamwe maURL nokuda rakashandurwa mapeji. kusangana uku inoda nyore chigamba kuti kuitwa pamusoro yepakutanga plugin, verenga sei vari FAQ, kana nehofisi isu kugamuchira dzine zvigamba faira. Tinovimba kuti remangwana shanduro Google-XML-sitemaps kuchasanganisira nama ichi kuburikidza default.
The kusangana wechipiri ane netori-super-cache chinopa caching nomazviri Wordpress, plugin ichi hakusi kuziya kwomwoyo uye inopa simba caching mashandiro mukutsinhana matani matambudziko munzira, kugadzwa zvakaoma uye nokudyidzana zvakatoipa kuoma. zvisinei, kusangana uku rinopa ichi plugin User kuchinja nyore izvo Kudzima Zvakachengetwa kare peji pamusoro rokushandura chiito, ichi kunotadzisa shanduro kubva kuitika akawanda nguva uye kubva vanoshandisa kuona vasiri rakashandurwa kugutsikana (uye nyaya car-shanduro, kushandura zvakare uye zvakare).
Kana uine zvakawanda plugins Unoda kusangana pamwe, uye une pfungwa sei (uye pamwe vamwe romutemo), chete rega katsamba pano. uye chokwadi – kufara itsva gumi kwatiri tose!
Update 2010/1/3 – Zvinoita sokuti paiva kukanganisa pamwe chigamba nemirayiridzo, mirayiridzo matsva akagadziridzwa uyu panzvimbo FAQ chikamu (ndatenda myatus). The nama rinogona kutorwa zvakananga kubva kubatana uku : SITEMAP-Musimboti-322-dzine zvigamba
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: Google-XML-sitemaps, kuduku, rusununguko, Wordpress plugin, netori-super-cache